China Oyster peptide ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Huayan
Oyster peptide bụ obere molekụla collagen peptide, a na-ewepụta ya site na mmiri mmiri ọhụrụ ma ọ bụ oyster a mịrị amị site na ọgwụgwọ tupu usoro pụrụ iche na teknụzụ mgbaze bio-enzyme na-agbado na obere okpomọkụ. Oyster peptide nwere ihe ndị na-achọpụta (Zn, Se, wdg), oporo polysaccha na-agba ịnyịnya na taurine, ha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kpuchido ma kwalite ahụ anyị. A na-ejikarị ya eme ihe na nri, ọgwụ na ngwaahịa nlekọta ahụike
Isi Iyi: ohuru ohuru ma ọ bụ okike a mịrị amị
Agba: Ìhè edo edo ma ọ bụ Icha mmirimmiri aja aja ntụ ntụ
Steeti: Powder 、 granule
Usoro Teknụzụ: Enzymatic hydrolysis
Isi: Site na ngwaahịa pụrụ iche na isi
Molekụla arọ: 500-1000Dal
Ngwugwu: 10KG / Bag, 1bag / katọn, ma ọ bụ ahaziri
Oporo peptide kwesịrị ekwesị maka ndị na-esighi ike, ndị na-emega ahụ na ndị na-a alcoholụ mmanya
Ọ nwere ọ bụghị naanị protein, vitamin, ihe ndị na-achọpụta ihe na oke kwesịrị ekwesị na taurine, kamakwa ọ nwere ọtụtụ nri na ihe ndị dị na mmiri, ọ nwere ike ịbụ ụdị mgbakwunye nri, ọ bụghị naanị na ahụ nwere ike ịmị ngwa ngwa, ma kwalitekwa absorption nke protein amino acid na shuga.
(1) Imeziwanye ọgụ na ịkwalite metabolism;
(2) guchịkwa ọbara obara, meziwanye mgbaàmà nke hyperglycemia;
(3) Ikpuchido umeji na igbochi akpụ;
(4) Iwelata ike ọgwụgwụ na imeziwanye ọrụ mmekọahụ;
Nọgide Na-enwe Mma Ma Na-eto Eto.
A na-eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe dị iche iche dịka nri, ịchọ mma na ọgwụ.
Thelọ ọrụ ahụ agabigala ọtụtụ asambodo dịka ISO45001, IS09001, ISO22000, SGS, HACCP, HALAL, MUI HALAL na FDA. Anyị na ngwaahịa izute chọrọ nke WHO na mba ụkpụrụ, tumadi exported na Europe, America, Australia, Russia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand na ụfọdụ mba na mpaghara na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Inye ngwaahịa ọzụzụ maka ndị ahịa na ahịa, teknụzụ na ahịa, ma nye usoro nkwado ọrụaka na azịza ngwaahịa maka ndị ahịa.
3.Originate si ahụike Hainan Island, họrọ ihe ndị dị mma ma jeere ụwa ozi.
Peptide oriri na-edozi:
Ihe Peptide Isi mmalite nke ngwaọrụ Isi ọrụ Mpaghara ngwa
Ukpa Peptide Ukpa nri Brainbụrụ ahụike, mgbake ngwa ngwa site na ike ọgwụgwụ, mmetụta moisturizing NRI AHUIKE AHUIKE
Azụ Pepe Agwa protein Mee ka uto nke probiotics, mgbochi mkpali, ma welie ọgụ
Soy Peptide Soy Protein Naghachi ike ọgwụgwụ,
mgbochi oxidation, abụba dị ala,
hapụ ibu ibu
Spleen Polypeptide Ọkpụkpụ ehi Meziwanye ọrụ mgbochi cellular mmadụ, gbochie ma belata omume nke ọrịa iku ume
Earthworm Peptide Earthworm Akọrọ Mee ka ọgụ dịkwuo mma, melite microcirculation, igbari thrombosis ma kpochapụ thrombus, na-edozi arịa ọbara
Nwoke Silkworm Pupa Peptide Nwoke silkworm pupa Chebe imeju, melite ọgụ, kwalite uto, belata shuga shuga,
ala mgbali elu
Agwọ Polypeptide Nwa ojii Mee ka ọgụ dịkwuo mma,
mgbochi ọbara mgbali,
mgbochi mkpali, mgbochi-thrombosis
Production Technology Usoro:
Azu akpụkpọ-asacha na nwoke ịga ụlọ ọgwụ- enzymolysis - nkewa- ịchọ mma na deodorization-nụchara anụcha filtration- ultrafiltration- ịta ahụ- nwoke ịga ụlọ ọgwụ- ịgba ihicha- n'ime mbukota- metal nchọpụta- elu mbukota- nnyocha- nchekwa
Nabata ngwa ọrụ dị elu na teknụzụ iji dọọ nrụpụta ngwaahịa nke mbụ. Mmepụta akara mejupụtara nhicha, enzymatic hydrolysis, filtration na ịta, ịgba ihicha, esịtidem na mpụga nkwakọ. A na-ebufe nnyefe nke ihe niile n'ime usoro mmepụta site na pipeline iji zere mmetọ nke mmadụ mere. Akụkụ niile nke akụrụngwa na ọkpọkọ na-akpọtụrụ ihe bụ nke igwe anaghị agba nchara, ọ nweghịkwa ọkpọkọ kpuru ìsì na njedebe nwụrụ anwụ, nke dị mma maka nhicha na disinfection.
Njikwa Ogo Ọdịmma
Laboratorylọ nyocha a na-acha nchara nchara bụ 1000 square mita, kewara n'ime ebe dị iche iche na-arụ ọrụ dịka microbiology room, physics and chemistry room, erikpu ụlọ, elu griin haus, nkenke ngwá ụlọ na sample ụlọ. Onwem na nkenke ngwá dị ka elu arụmọrụ mmiri mmiri frasi, atọm atọ absorption, mkpa oyi akwa chromatography, nitrogen analyzer, na abụba analyzer. Mepụta ma melite sistemụ njikwa njikwa, ma nyefee akwụkwọ ikikere nke FDA, MUI, HALA, ISO22000, IS09001, HACCP na sistemụ ndị ọzọ.
Ngalaba njikwa mmepụta mejupụtara ngalaba na-ahụ maka imepụta na ogbako na-amalite iwu mmepụta, yana isi njikwa isi ọ bụla site na ịzụrụ ihe, nchekwa, nri, mmepụta, nkwakọ ngwaahịa, nyocha na ụlọ nkwakọba ihe na njikwa usoro njikwa ndị ọrụ aka ọrụ na-achịkwa ma na-achịkwa ya. ndị ọrụ njikwa. Usoro mmepụta na usoro teknụzụ agafeela nkwenye siri ike, na ngwaahịa ngwaahịa dị mma ma kwụsie ike.
Nke gara aga: Tilapia Azụ Collagen Peptide
Osote: Azụ Pepe